JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Shanaffaa -
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran afran akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa shanaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Waan hundaafuu xiqqooshii isin irraa turuu kiyyaaf, cimseen dhiifama isin gaaffaddha!
1) Birkoo – sector
2) Daatuu – umbirella (= agoobara, dibaabee)
3) Dilaala – land tax (= gibira)
4) Doonnii – ship
5) Faallee – direction
6) Geejjiba – transport, transportation
7) Golambaa – museum
8) Goosii – verb*
9) Habuucha – rubbish, refuse
10) Hulluuqqoo – tunnel
11) Ilbiisa – insect
12) Kabata – cupboard? (= dulaaba)
13) Kubila – continent (kuta biyya lafaa > kubila = ardii)
14) Laallee – information
15) Mijjirii – public space, square (= addabayii)
16) Oggayyii – cliche`
17) Qoorbee – fork (insrument for eating, = shuukkaa)
18) Sabdanee – multinational
19) Sammuyyaa – mentality
20) Sanfila – atenna, aerial
21) Shaayyaa – weekend
22) Sheeggabuu – to read (= kitaaba faa dubbisuu)**
23) Tooba – culture (= aadaa)
24) Ulaagaa – creiteria, gauge
25) Xiyya – arrow (= lawwee)
* Jechi “goosii” jedhamu kun sagalee Oromoo isa “gochuu” jedhamu irraayyi baafame. “Gochuu” jenneetoo “ishiin goote, nuti goone” faa jenna mitiree?
** Sheegabbii = reading (—-)
********************* // ********************
Previous Ethiopia: Expectation About TPLF Central Committee Meeting
Next Renewed Oromo-Somali clashes in Ethiopia kill more than 20: state media